Google iwu olu jiri "Ok, Google" | Gam akporosis
Niile olu olu Google ugbu a ka o jiri "Ok, Google"
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Yesnyaahụ bụ mechaa malite usoro nke Spanish «Ok, Google» inwe ike iji site na Google Launcher n'onwe ya ma ọ bụ site na Google Ugbu a, iji jiri iwu olu na-enweghị mkpa pịnye na keyboard ma ọ bụ ịmalite ngwa ahụ na mmegharị. Dị ka ụfọdụ n'ime gị ga-adị ịmalite ịchọpụta ọrụ ọhụrụ a nke ahụ na-enye anyị ohere ịmekọrịta na ekwentị anyị anyị na-ewetara gị iwu olu Google niile nke ị nwere ike iji mgbe iwu "Ok, Google" gasịrị.
Site na imata ihu igwe, imepụta ihe edeturu na ncheta, ihapu udiri egwu di iche, ima ihe oge o bu na obodo di iche, igu ya na calculator, imata ndi ihe nkiri, ụdị ozi ala niile ma ọ bụ ozi izugbe bụ ụfọdụ n'ime ọtụtụ nhọrọ ị ga-eji na ọrụ ọmarịcha ọrụ Google a.
Mgbe iwu ahụ dị "Ok, Google" ị nwere ike iji nke ọ bụla edepụtara n'okpuru. Gbalịa ya ka ị chọpụta ụzọ ọhụụ ị ga-esi jiri ekwentị gị emekọrịta ihe. Need ga-achọ nwere ụdị Google Search kachasị ọhụrụ na ị ga-enwerịrịrịrị ibudata na Storelọ Ahịa Play iji nwee ike iji iwu a site na Google Ugbu a. Ọ bụrụ na ị wụnye Google Launcher ị nwere ike iji ya site na ekwentị na desktọọpụ na-enweghị mkpa imeghe Google Ugbu a.
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ ịnụ a olu na-ekwu aha mgbe a na-akpọ oku, mgbe ahụ ị ga-ahazi ya na ọnụ gị.
1 Ndepụta iwu olu iji "Ok, Google"
1.2 Ihe edeturu na ncheta
1.4 Oge na data
1.5 Ihe mgbako
1.8 Ozi Ala
1.9 Ozi zuru oke
1.11 Maapụ na igodo
1.14 Oku na ozi
Ndepụta iwu olu iji "Ok, Google"
Kedu ọnọdụ okpomọkụ + (ụbọchị) + (n'ụtụtụ) ma ọ bụ (n'ehihie) ma ọ bụ (n'abalị) ga-adị?
Ọ ga-ezo mmiri echi ka ọ ga-ezo ụbọchị (ụbọchị)?
Oge na + (obodo ma ọ bụ obodo)?
Ihe edeturu na ncheta
Chetara m + (ihe = ederede) na (ọtụtụ awa) - Ihe Nlereanya: chetara m (zụta nri) n'ime awa 2 + (tinye mkpu)
Teta m na + (ọtụtụ awa) - Maatụ: kpọtee m n’ime elekere asatọ
Tọọ mkpu maka + (oge) - Ihe Nlereanya: Tọọ mkpu maka 1 PM
Tinye akara + (ederede)
Gee ntị + (aha abụ) ma ọ bụ (aha onye na-ese ihe) Gwuo Egwu ma ọ bụ Youtube. Ọ bụrụ na abụ ahụ adịghị na ama, mepee vidiyo na Youtube
Egwu + (omenka)
Albums + (omenka)
Companylọ ọrụ, ndị otu ma ọ bụ otu + (nke onye na-ese ihe ma ọ bụ otu)
Ọrụ + (omenkà)
Oge na data
Oge na + (mba)
Mgbe + (ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ) na + (mba)
Oge mpaghara na + (obodo)
Otutu + (ego) + bụ 1000 (ego)
(nọmba) + pasent nke (nọmba) - Ihe Nlereanya: 44 pasent nke 100
Tọghata + (nọmba) kilomita na kilomita
Square mgbọrọgwụ nke + (nọmba)
(Nọmba) + (onye ọrụ) + (nọmba) + (onye ọrụ) - Ihe Nlereanya: 3 site na 5 kewara site na 3
Nkedo nke + (usoro ma ọ bụ ihe nkiri)?
Onye mepụtara + (ihe nkiri)?
Kedu mgbe (fim) wepụtara?
Ogologo oge ole ka ihe nkiri + (aha) dị?
Kedụ ihe nkiri (Director) mere?
Kedu fim nke + (aha) mere?
Bọchị ntọhapụ, ihe omume mbụ, onye nduzi, ihe nkiri, egwu, onye okike, ndị edemede ma ọ bụ onyinye + (ihe nkiri ma ọ bụ usoro)
Ihe nkiri, nhọpụta ma ọ bụ onyinye + (omee ma ọ bụ omee)
Kedu mgbe (otu) na-egwu egwu?
Oge (Otu) oge
Nsonaazụ + (otu)
Gwọ ọnwa nke + (onye egwuregwu)
+ (Ndị egwuregwu) otu
Awards + (onye egwuregwu)
+ Ike (ámá egwuregwu)
Oge mmeghe nke (stadio)
Emechi + (ámá egwuregwu)
+ (Stadium) otu ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ
Population, mpaghara, ebe mmasị + (ebe ma ọ bụ obodo)
Elu, omimi ma ọ bụ agwaetiti + (Oke Osimiri ma ọ bụ Osimiri)
Isi obodo + (mba)
Ebee ka ụlọ kacha elu n'ụwa
Afọ nke ụwa
Ogologo, igba, ọnụ, àkwà mmiri, obodo ma ọ bụ mba + (osimiri)
Foundednye hiwere + (ụlọ ọrụ)?
Onye bụ onye isi ụlọ ọrụ + (ụlọ ọrụ)?
Mara elu, ibu, afọ, ụbọchị ọmụmụ, agụmakwụkwọ, ụbọchị ọnwụ, ihe kpatara ọnwụ, ebe amụrụ ya, onye ọlụlụ, ndị nne na nna, ụmụnne ya, ụmụaka + (agwa)
Ogologo, ala, nraranye, ọrụ, ụkpụrụ ụlọ ma ọ bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ + (ihe ncheta ma ọ bụ ụlọ)
Nkọwa + (okwu)
Onye dere + (aha akwụkwọ)?
Kedu mgbe amụrụ + (aha)?
Kedu mgbe + (aha) nwụrụ?
Mwube mmalite + (ihe ncheta ma ọ bụ ụlọ)
Kedu akụkụ nke + (nka)?
Onye mepụtara + (ihe)?
Ọnye na-bụ + (agwa)?
Foto ndị dị na (ihe ncheta) + (na mgbede) (mgbe chi bọrọ) (mgbe chi jiri)
Egosi m foto + (aha) + (ihe) Ihe nlere: gosi m foto nke gam akporo iri apụl
+ (Companylọ ọrụ) logo
Maapụ na igodo
Maapụ + (obodo ma ọ bụ obodo ma ọ bụ obodo ma ọ bụ kọntinent)
Kpọga m + (azụmahịa ma ọ bụ ịzụ ahịa) + ụkwụ ma ọ bụ ụgbọ ala
Ebee ka (ebe ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ ihe ncheta) + (obodo) dị?
Ebee ka ọ dị (obodo ma ọ bụ obodo ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ)?
(ebe nri) + (obodo)
Kpọọ ụlọ nkwari akụ (aha) + (obodo)
Uzo esi aga + (aha ma ọ bụ ụdị ogige, ngalaba ma ọ bụ azụmaahịa) + (obodo)?
Mara ebe dị anya: Anya + site na A + ruo B - Omuma atu: ebe di anya na Madrid na Malaga
Gaa / mepee / gosi m + (URL)
Open + (aha ngwa) - Ihe Nlereanya: Mepee WhatsApp
Kpọọ + (kọntaktị)
Ziga ozi na + (kọntaktị) ozi (ozi)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Niile olu olu Google ugbu a ka o jiri "Ok, Google"
Ziga ozi na (kọntaktị) ozi (ozi)
Daalụ, m tinye ya na ndepụta ahụ!
Gabriel Viso Ọrụ dijo
Nsogbu bụ na ọtụtụ n'ime kọntaktị ndị a (dịka, "ichetara m ... na ... awa") ga-eji aka ha mezue, site na imetụ ihuenyo ahụ aka. Ugbu a, anaghị ekwe ka nkwenye olu nke kọntaktị na ụzọ eji eme ihe. Enwere m nzuzu na ikpe na njehie iji mee ka ekwentị pịa n'ebughị aka ya aka (naanị site na olu) mgbe kọntaktị nwere ihe karịrị otu nọmba ekwentị, nke a na-ahụkarị.
Zaghachi Gabriel Viso Carrera
Enwere obere ọgbaghara tupu nke ahụ, ị ​​nwekwara ike hazie kọntaktị niile nke ọma, mana n'ezie ị ga-enweta ya! : =)
N'ezie, ọ bụrụ na m nwere ha dị ka nke a, e nyere ha iwu nke ọma ... M na-ekwu na ọ dịghị onye na-agwa gị na imecha ọkpụkpọ na-enweghị aka maka kọntaktị nwere «ụlọ» na «mobile» phones, ihe atụ, ị ga-asị «Call Manuel Ramírez na ekwentị ụlọ. Ọ bụghị "ụlọ" ma ọ bụ "ụlọ", ma ọ bụrụ na ị kọwaa, mgbe ọ jụrụ gị "Homelọ ma ọ bụ ekwentị?", You nweghị ike ịza "Homelọ": ị ga-emeghachi ihe niile.
Ọ bụ ya mere m ji gabiga ọtụtụ ule na njehie ...
Ọ ga-amasị m ebe ahụ ka ị bụrụ iwu iji mechie ụfọdụ ngwa ma ọ bụ gaa na ihuenyo ụlọ, ebe ọ bụ na ị gbanye nhọrọ na «ọ dị mma google» dị mgbe ihuenyo ahụ na-arụ ọrụ, na mgbe ị gụsịrị ozi ma ọ bụ zipụ wazzap ị na - ekwu «Ok google, gaa bido" ma ọ bụ "mechie youtube" bara uru ọbụlagodi mgbe ị kwuchara "mma google, ọnọdụ dị ugbu a" ma enyela gị ogo ahụ, sị "mma google, mechie google" wee laghachi na mbido, ma ọ bụ na opekata mpe ọ bụ uche m
juliana medina dijo
Ọ ga-amasị m kama ịsị mma. google ugbu a, enwere ike idozi ya iji hazie ya na aha ọzọ ma ọ ga-amasị m ka ị lelee n'ihi na ọ dị mma na m na-arụ ọrụ na-enweghị iwu ọ bụla ọtụtụ ugboro n'ụbọchị, nke bụ eziokwu bụ na m ga-arụ ọrụ ya n'ihi na ọ bụ ọbụna a nsogbu nye m, enwere m olile anya ma were ya guo azịza m
Zaghachi julio medina
Samsung na-achị Apple na iPhone ọchị na mgbasa ozi a.
Ngwa iri nri ma racha mkpịsị aka gị: Taa Ihe m siri nri taa